Mbara Igwe nke Anyanwu - Kimroy Bailey Group
Nwụnye nke Rooftop bụ sọks ndị kachasị ewu ewu maka ịwụnye ogwe anyanwụ. Usoro ihe ngosi a na-esochi ndị ọrụ anyị abụọ n'ọhịa na-eduzi nrụnye n'elu ụlọ. Solọ akwụkwọ Anyanwụ dị na mbara igwe ahụ na-ebili na nke onwe ya, na-eme ka ụmụ akwụkwọ nwee mmetụta na-eme ihe omume.
SKU: KB-OC-003 Categories: Renewable Energy, Usoro nkuzi ume, Mbara Igwe nke Anyanwụ Tags: Ntaneti Ntaneti, Anyanwụ Rooftop
E mepụtara Solar Rooftop course maka onye nrụnye chọrọ iji hụ na nrụnye ya bụ ọrụ aka nke ọma. N’ebe anyị na-emebu Kimroy Bailey Group, nke a bụ usoro vidio na-egosi ihe na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịbịaru nso na onwe.
Usoro dị iche iche maka ụdị ụlọ elu dị iche iche
Gosiputara Ngwaahịa ọkacha mmasị na Mmepụta maka nrụnye Rooftop
Na-egosipụta usoro nchekwa maka nrụnye n’elu ụlọ
The Stepkwụ na larkwụ Solar Rooftop N'ezie kpuchie intricacies nke itinye anyanwụ panel na elu ụlọ, wụnye ihe owuwu aluminium, na-arụ ọrụ n'ọtụtụ dịgasị iche iche, ntuziaka nchekwa na nchedo nke ọma. O tinyekwara ntuziaka zuru ezu na ijikọ oghere nke anyanwụ na usoro ma ọ bụ ihe yiri ya na ikpebi nhazi nke kachasị mma maka ịhazi usoro gị. Nke a bụ usoro ịhụ ụzọ kacha hụ anya na ịntanetị.
Nwụnye nke Rooftop bụ sọks ndị kachasị ewu ewu maka ịwụnye ogwe anyanwụ. Usoro ihe ngosi a na-esochi ndị ọrụ anyị abụọ n'ọhịa na-eduzi nrụnye n'elu ụlọ. Solọ akwụkwọ Anyanwụ dị na mbara igwe ahụ na-ebili na nke onwe ya, na-eme ka ụmụ akwụkwọ nwee mmetụta na-eme ihe omume ahụ. Were ọrụ gị na ụzọ ọhụrụ taa.
Agụmakwụkwọ Atụrụ Gị aro:
Nzọụkwụ Mbara Igwe Mbara Igwe - Ntuziaka zuru oke maka nzọụkwụ site na ntinye nwụnye site na mmalite ruo n'isi. mụta iji obi ike tinye usoro mbara igwe zuru oke
Anyanwụ Ahịa Ahịa- Zụlite usoro ire na ike gị. Mụta otu esi emeri egwu nke jụrụ ma melite nsonaazụ ahịa gị. Hey agaghị a itụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị Hercules nke Ahịa n'ihi na ọ bụghị anyị niile mụrụ dị ka ndị na - ere ahịa - 90% ka anyị kwesịrị ịme.
Na-abịa oge adịghị anya:
Anyị ga-aga n’ihu n’iwepụta ihe ọhụrụ n’usoro ọhụụ maka nrụnye ụlọ ọhụrụ ọhụụ na ngwaahịa shingles sitere na Kimroy Bailey Group na ndị egwuregwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mee ka nkà gị dị ọhụrụ Anyanwụ Refresher Courses
1 nyochaa maka Anyanwụ Rooftop N'ezie